Yintoni iindawo zokudalwa kwe-backlink zingenisa ixabiso kwiwebhusayithi yakho?
Namhlanje, ukukhangela i-algorithms ye-injini ye-injini ibe yinkimbinkimbi kwaye ihlakaniphile. I-Google inikela ngemigangatho emitsha njenge "DA" (iGunya lesiGqeba) kunye ne "PA" (iGunya leNgcaciso) ukuze ithathe indawo ye-PageRank ebalulekileyo phambi. Ezi zigaba ezintsha zisetyenziswe ngokubanzi ekumiseni izinga legunya lewebhusayithi.
Ukwakha iphrofayli yokwakha yekhonkco kunye nenamandla yiphupha layo yonke i-website yomnikazi kunye ne-blogger. Amagunya aphezulu aphezulu angabangela ixabiso elininzi kwisiza sakho. Okokuqala, bangakwazi ukuphucula isikhundla sakho kwiwebhusayithi kwi-SERP. Okwesibini, bathatha iithagethi kunye nokuguqulwa kwendlela kunye neyesithathu baya kukhulisa ingeniso yakho yoshishino.
Akuyona into elula yokufumana i-backlink kwiindawo eziphezulu ze-DA. Kufuneka ube nolwazi oluzodwa kunye nezakhono ukudala umkhankaso wokwakha unxibelelwano. Nangona kunjalo, akufanele ulahlekelwe nangona uvakalelwa kukuba unamava kulo mkhakha. Kule nqaku, uya kufumana uludwe lweewebhu eziphezulu zeDA ezamukela iimpawu ezisuka kubasebenzisi abatsha kwaye zinike ithuba lokudala iphrofayili entsha. Ngaphezu koko, ndiza kukwabelana ngamanye amacebiso malunga nendlela yokwenza iprofayile ye-backlink favorable.
Ukuba usebenzisa imveliso kwaye unelisekile kumgangatho wayo, qwa lasela thumela u bungqina. Xa udala ubungqina, qiniseka ukuba uqaphele ukuba umniki-mveliso unokuyibeka kwikhasi lasekhaya okanye kwiphepha lokufaka ubungqina. Njengomthetho, ababoneleli bafaka ikhonkco yakho eduze kobungqina bokubonisa ukuba ungumntu wangempela. Ngoko, unokufumana umgangatho kunye ne-backlink yezinto ezivela kubungqina.
Funa amathuba okuxhuma ngokubhengezwa kweblogi
Ukuba unika abasebenzisi ngomkhiqizo wesofthiwe, ulwazi lomgangatho okanye ezinye iimveliso ezixabisekileyo, ukuyijika ibe yi-backlink efanelekileyo nephezulu. Unokuzifumana ngokuzinikela kwiiblogi okanye ucele abathengi bakho ukuba bashiye impendulo.
Landela le myalelo ukuze ufumane i-backlinks esemgangathweni kwisayithi yakho ngokuhlolwa kweblogger:
Fumana iblogi kwi-niche yakho sele isithumele into ehambelana noshishino lwakho. Faka kwibhokisi yokukhangela ye-Google umbuzo ngegama lakho elingundoqo. Ngenxa yoko, injini yokukhangela izokunika uluhlu lwewebhusayithi kunye neeblogi ezibhekisela kwishishini lakho.
Ukucoca ngaphandle nawaphi na amanqaku amakhulu kunye neziza ezintsha. Ekugqibeleni, uya kushiywa ngoluhlu oluqinileyo lweblogi ezinokuthi zibe nomdla kwisipho sakho.
Finyelela kubanikazi bewebhu kunye neeblogi nge-imeyile okanye umnxeba. Yiba nomusa kwaye uhloniphe kubo kwaye uqaphele kakhulu ngolwimi olusebenzisayo. Kungenzeka ukuba uya kubuzwa malunga nentlawulo okanye nayiphi na imeko ezuzisayo.
Ukuqhawula isixhobo yindlela elula yokufumana i-juice enamandla indawo yakho. Kufuneka ufumane iinkcazelo malunga newebhusayithi yakho apho ikhonkco lakho lesayithi alibonwanga. Yonke into oyifunayo kukuqhagamshelana nombhali weli khankanywe kwaye umcele ukuba angeze ikhonkco yakho. Ezi ngxaki zisebenza njengevoti kwi-brand yakho kwaye ziphakamisa igunya lakho lewebhusayithi emehlweni e-Google Source .